Igumbi eliGreen Space, ibhedi enye enegumbi lokuhlambela labucala. - I-Airbnb
Igumbi eliGreen Space, ibhedi enye enegumbi lokuhlambela labucala.
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguRosa María
URosa María yi-Superhost
Indawo eluhlaza "iVilla Verde" ijikelezwe yindalo entliziyweni yeSan Vicente kwaye lulungelelwano olugqibeleleyo phakathi kokuthuthuzela kunye nendalo. "I-Villa Verde" inika amagumbi okulala amathathu, ngalinye linendawo yalo yokuhlambela kwaye lihonjiswe ngendlela ekhethekileyo. IVilla Verde yindawo egqibeleleyo kwabo beze kukhenketho kunye / okanye ishishini.
Indlu yam ihonjiswe luthando oluninzi kum kunye negumbi layo ngalinye. Yindlu eneendawo ezininzi eziluhlaza ezilungele ukuba nekomityi yekofu efunda incwadi okanye ukuphumla nje.
Le yibhedi yokumkanikazi epholileyo kunye negumbi lokuhlambela labucala elilungele abantu ababini, likwabandakanya i-air conditioning kunye ne-TV. Zenze ekhaya kwaye uzive ukhululekile ukusebenzisa indawo yokutyela, ikhitshi, igadi kunye nokuba yeyiphi na ye-3 yeendawo zokuhlala ezahlukeneyo ezijikeleze indlu.
Embindini weSan Vicente, imizuzu eyi-10 uhamba ukusuka kwipaki ephakathi yaseSan Vicente. Iphelele kwabo bathanda i-agrotourism ukuze bakwazi ukutyelela i-sugar cane mill yendabuko kwaye babone ukuba yinkqubo yokudala iswekile ekrwada evela kummoba. Ngaphandle kokuphoswa lithuba lokungcamla eyona venkile iqhelekileyo yeelekese eSan Vicente "Dulceria Villaltal". Ewe kwakhona iphelele ukutyelela kwaye unyuke intaba-mlilo "Chinchontepec" ebekwe kwenye yeentlambo ezidumileyo kulo lonke elase-El Salvador, "i-El Valle Jiboa" ephawulwe ngokulinywa kommoba kule ndawo.
Kufutshane kakhulu nepaki ephakathi, engumqondiso wedolophu kwinqaba yayo edumileyo, apho unokunyuka kwaye ube nombono omhle wesixeko sonke saseSan Vicente. Ukuba ufuna uncedo malunga nokundwendwela eSan Vicente ungazihluphi ngokundibuza.Embindini weSan Vicente, imizuzu eyi-10 ukusuka kwipaki ephakathi yaseSan Vicente. Iphelele kwabo bathanda i-agrotourism ukuze bakwazi ukutyelela i-sugar cane mill yendabuko kwaye babone ukuba yinkqubo yokudala iswekile ekrwada evela kummoba. Ngaphandle kokuphoswa lithuba lokungcamla eyona venkile iqhelekileyo yeelekese eSan Vicente "Dulcería Villalta". Ewe kwakhona iphelele ukutyelela kwaye unyuke intaba-mlilo "Chinchontepec" ebekwe kwenye yeentlambo ezidumileyo kulo lonke elase-El Salvador, "i-El Valle Jiboa" ephawulwe ngokulinywa kommoba kule ndawo.
Kufutshane kakhulu nepaki ephakathi, engumqondiso wedolophu kwinqaba yayo edumileyo, apho unokunyuka kwaye ube nombono omhle wesixeko sonke saseSan Vicente. Ukuba ufuna uncedo malunga nokundwendwela eSan Vicente ungazikhathazi ngokundibuza.
45 imiz. ukuya kwisikhululo seenqwelomoya sase-El Salvador
45min. -Iyure eyi-1. ukuya kwikomkhulu lase-El Salvador, iSan Salvador
Iyure e-1 - 1:30 hr. ukuya elunxwemeni "La Costa del Sol" olona lwandle ludumileyo kweli lizwe
I-1: 30hr ukuya elunxwemeni "El Tunco" enye yezona lwandle zidumileyo kwihlabathi ukuziqhelanisa nokusefa.
Umbuki zindwendwe ngu- Rosa María
Nanini na xa uyidinga, ungasondela kwaye undibuze malunga nolwazi oluyimfuneko endinokukunika ngalo malunga nokuhlala kwakho okanye ulwazi malunga neendawo ezinomdla okanye ezothutho.